आर्थिक सूचांक भन्छ : सरकार सफलताको बाटोमा अग्रसर हुँदैछ - अर्थ/शेयर बजार खबर
आर्थिक सूचांक भन्छ : सरकार सफलताको बाटोमा अग्रसर हुँदैछ
काठमाडौं । आर्थिक सूचांकले सरकार सफलताको बाटोमा अग्रसर भैरहेको देखाएको छ । अर्थमन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सरकारले बजेटमा लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुरा गर्न सफल भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएकोमा सो बर्ष ७ दशमलव ०५ प्रतिशत सरकारले लक्ष्य पुरा गरेको हो ।
नियमित विद्यूत आपूर्ति, पर्यटकको आगमन वृद्धि, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा प्रगतिजस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिका लागि भूमिका खेलेको छ ।
देशभित्र वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्नु र युवाहरु स्वरोजगारतर्फ आकषिर्त भएका कारणले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको मन्त्रालयले विश्लेषण गरेको छ ।
विद्युतको नियमित आपूर्तिले पेट्रोलियम पदार्थको आयातको वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको छ । यसले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो । बैंकिङ प्रणालीले स्थानीय तहमा स्वरोजगार बन्न चाहनेका लागि स्रोतको उपलब्धता सहज हुनु, स्वरोजगार बन्न विदेशबाट फर्केका युवा, दलित, शिक्षित व्यक्तिलाई सहूलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थाले पनि अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक भूमिका खेलेको सरकारको भनाई रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल बजेट रु. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड मध्ये संशोधित लक्ष्य रु १२ खर्ब ९ अर्ब रहेको थियो । चालू तर्फ रु. ७ खर्ब ८३ अर्ब, पूँजीगततर्फ रु. २ खर्ब ७३ अर्ब र वित्तीयतर्फ रु. १ खर्ब ५२ अर्ब रहेकोमा सरकारले रु. १० खर्ब ९४ अर्ब खर्च गरेको छ । यस्तै, चालूतर्फ रु ७ खर्ब १५ अर्ब, पूँजिगत रु. २ खर्ब ३८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.१ खर्ब ४१ अर्ब खर्च गरेको छ । कुल खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०. ८ प्रतिशत बढी हो ।
जुन चालूतर्फ २ दशमलव ७ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २०.५ प्रतिशत बढी हो भने पूँजीग खर्च १२.२ प्रतिशत कम हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार करको दायरा विस्तार गर्दै १ लाख ९९ हजार १ सय ६६ करदातालाई व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर र २ लाख २९ हजार ८ सय ५०करदातालाई व्यक्तिगत स्थायी लेखानम्बर वितरण गरिएको छ ।
व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका मध्ये ३६ हजार ५ सय ३२ करदाता मूल्य अभिवृद्धि करमा र १६ हजार ६ सय ८८ करदाता अन्तः शूल्कमा थप दर्ता भएका छन् ।